Site Manager Male (1) Post
– Posted by Talent Hub in Myanmar
အသက် (၃၀) နှစ်အထက် Site များကို ကောင်းမွန်စွာဦးစီးနိုင်ရမည်။ Site ကြီးကြပ်မှုအတွေ့အကြုံ (2) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ လစာအပြင်+အပိုဆုကြေးပါခံစားခွင့်ရှိသည်။
For more information please call : Talent Hub ( 09 776 666 852 /09 456 666 852)
You can apply from here or send your resume [email protected]
Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. 316 total views,2today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ